Indlu encinci kwindawo yokuhlala enedama lokuqubha
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uEric iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhaya leeholide elicandiweyo elinesiqingatha esinegadi, ebiyelweyo, kwindawo yokuhlala ekhuselekileyo enedama lokuqubha, inkundla ye-pétanque kunye nendawo yokupaka yabucala, ekwi-600 m ukusuka kunxweme olunesanti eSte Marie la mer plage. Ilungele intsapho yabantu abadala be-2 kunye nabantwana be-3.
Egadini, uya kufumana ii-lounger zelanga ezi-4, ifenitshala yegadi yamatye enomthunzi, ibarbecue enegrill kunye nehashe lempahla. Ibhedi: Igumbi lokulala eli-1 kunye neebhedi ezingama-90 cm, i-mezzanine kunye nebhedi eyi-1 kabini ye-140 cm kunye nebhedi eyongezelelweyo ye-80 cm. Kukho imiqamelo, iiduvethi, ilinen yokulala, iitawuli, ijeli yeshawa kunye neshampu. Izixhobo: umatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji ephezulu, ifriji ephezulu, i-oven edibeneyo kunye ne-microwave, iTV, umenzi wekofu yokucoca, iketile, i-toaster, iprosesa yokutya, intsimbi, isomisi seenwele. Iimveliso zoomatshini zinikezelwe.
Isango lokungena kwindawo yokuhlala livuliwe emini kwaye livalwe ngokuzenzekelayo malunga ne-11 p.m. Idama lokuqubha: 20m x 10m kunye nebhafu encinci, evulekileyo ukusuka kwi-15/06 ukuya kwi-30/09, ukunxiba i-bracelet kunyanzelekile kwaye iibhulukhwe ezimfutshane zokuqubha azivumelekanga ukungena echibini. Ulwandle olusekupheleni kweAvenue des Marendes luxhotyiswe ngeeshawari kwaye lujongwe ngabahlanguli. Zonke iivenkile kunye neenkonzo zikumgama wokuhamba. Isendaweni ukuhambahamba intaba (2H), ngemoto e-Spain (1y), usuku reserve Afrika Sigean (45mn), i ngokuhlwa yekhasino of Canet (4km) okanye ukufumanisa bezwe iiwayini zalapha kweli Corbière okanye iiseli zeBanyuls.
Zonke iivenkile kunye neenkonzo ezibalulekileyo zikho
kufutshane (ukutya, impilo, amapolisa, iofisi yabakhenkethi).
Siya kube silapho ukuze sinamkele ngomhla wokufika kwakho kwaye siya kuhlala sifikeleleka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: 66182 2019 0054
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R9094
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sainte-Marie